चुनाव « Salleri Khabar
–हरि न्याैपाने निराकार
सानो छँदा असारे गर्मी बिदामा प्रायः घरका कान्छा सदस्यको काम एउटै हुन्थ्यो– हरिया केराका पातले छाएको सानो छाप्रामा बसेर धानको बीउ हेर्ने । गर्मी भए दुलही खोलामा डुबुल्की मार्ने र माछा भन्दै चेपागाँडाका बच्चालाई रारा चाउचाउको खोलमा राखेर पाल्न घर ल्याउने ।
कहिलेकाहीँ कुलो ताछेर चौडा बनाउन हिँडेका झलारीहरुले,“ ओइ थरुनीको पोइ, के छ ?” भन्दा हाम्रा कान लाजले राता खुर्सानी झैं लाल हुन्थे । बा भन्नुहुन्थ्यो,“ चौधरीलाई पौरखमा कसैले जित्न सक्दैन ।” जेठ असारको उष्ण गर्मीमा पनि झलारीहरु हातमा फरुवा बोकेर कुलो ताछ्न निस्कन्थे ।
मेरो केटाकेटी मन कुलाको डिलमा बसेर पौरखी पाखुराको लय निहाल्थ्यो । झलारीले ताछेर चौडा बनाएको गाउँको कुलोलाई मैले कसैले फड्केर नागेको देखेकै थिएन ।
एकपटक खेत बटैया लगाउने बड्काले जाँडको जोसमा हाम फालेर नाग्न खोज्दा खसेको देखेर मेरी आमालाई खित्काको लहर सम्हाल्न गाह्रो भएको थियो । एकदिन धानको ब्याड गोड्न मस्त मेरी आमालाई, “यो कुलो कस्ले नाग्न सक्छ ?” भनी जिज्ञासा राखेको थियो । आमाले फिस्स हाँस्दै आफ्नै सुरमा राजाले भनी फर्काएको जवाफले मेरो मस्तिष्कको एउटा कुरामा चार आनाको घडेरी किनेर सानो छाप्रो नै हालेर बस्यो । मलाई लाग्दथ्यो कि त्यो कुलो भगवानले बाहेक कसैले नाघ्न सक्दैन । के भगवान र राजा एउटै हुन ?
आमाको जवाफपछि मेरो मनमा राजा शब्दले अनौठोसँग आफ्नो कब्जा जमायो । मानौँ उनमा दैवीशक्ति छ । त्यसैले त उनले आम मानिसले गर्न नसक्ने काम पनि गर्न सक्छन । वर्षाको भेलमा उर्लिएको राप्ती नदी पौडिएर पार गर्न होस् वा बिहेको भतेरमा पाकेको एक ताउला पुलाउ एकै पटकमा सिध्याउन किन नहोस ! ती काम राजाका लागि मात्र सम्भव थियो । उनी सिमलको रुख चढ्न सक्थे, सिस्नाको झाडीमा दौडन सक्थे, उनलाई गुच्चा खेल्नमा कसैले जित्न सक्दैनथ्यो ।
‘तैले भन्दा राम्रो त राजाले गर्छन् ‘ भन्दै कसैको घमण्ड चकनाचुर पार्न उनै काम लाग्थे ।
शिरमा ढाका टोपी, ठुलाठुला सिसा भएको चस्मा, घोप्टिएका काला जुँगा र ओठको मन्द मुस्कान भएको राजाको फोटो दाइ दिदीका किताबबाट खोजेर आफ्ना कापीमा टाँस्नु र अरुलाई रुप्पे गोटा बेच्नु मेरो लागि नौलो कुरा थिएन ।
“बा राजा कहाँ बस्छन ?” एकदिन आँगनको डिलमा बसेर आफ्ना दाह्री बनाई राखेका बालाई मैले प्रश्न तेर्साएथेँ । “काठमाडौको नारायणहिटीमा” बाले फर्काएको छोटो जवाफले ठूलो अर्थ बोकेको थियो किनकी मेरो गाउँबाट काठमाडौ जाने बस छुट्थ्यो तर बैकुण्ठ जाने बस मैले कहिल्यै देखेको थिइन् ।
भगवानले अवतारको रुप धारण गरेपछि बैकुण्ठबाट झरेर यस मर्त्यलोकमा हाम्रोबीच बस्छन् भनेर बाले बेला बेलामा रामायण र महाभारतका कथा सुनाउनु हुन्थ्यो । आखिर भगवान राम र कृष्ण पनि त राजा नै थिए ।
“हाम्ले नि राजालाई हेर्न पाउँछम बा ?” मेरो कौतुहलता मेट्न बाले पाइन्छ भन्ने संकेतमा टाउको हल्लाउनु भएको थियो । अनि छुन नि बा ! मेरो इच्छाले नचाहिँदो उचाई लिंदै थियो । बाले ठुला मानिसले मात्र पाउँछन् भनेपछि मेरा मनमा ठुलो कसरी बन्ने भन्ने होला भनी हुटहुटी जगाइदिनुभयो ।
५६ सालको चुनाव आयो । मान्छेहरु आफ्ना नेताको चुनाव प्रचारमा दिलो ज्यानले लागेका थिए । कतै सूर्य, कतै रुख, कतै हलो, गिलाससँग जोडिएका मान्छेका पोस्टरले बिजुलीका पोल, बिक्रम ट्याम्फुका भित्ता, चौपारीका पिपल ढाकिएका थिए । चुनावमा जिताए देशको माहोल फेरिने भन्दै मान्छे आफ्ना–आफ्ना नेताका तारिफ गर्थे र मान्छेका हुल जोडले थपडी बजाउँथे ।
आफ्ना घरका भित्तामा टाँस्नु भनेर छिमेकी काकाले दिएका पोस्टर दिदीका किताबका गाता बनेका थिए, जसमा भएका मान्छेमा मैले लुकीलुुकी जुँगा दाह्री थपिदिन्थे । त्यसो गर्दा मलाई पापको कुनै भय थिएन किनकी त्यसमा राजा थिएनन् । मलाई लाग्यो चुनाव जित्नलाई उनलाई प्रचार प्रसार गर्नै पर्दैन । उनलाई कस्ले चिन्दैन र ? जसलाई कसैले चिन्दैन उनैलाई प्रचार प्रसारको आवश्यकता पर्दछ ।
तर मेरो मनले मानेन । राजाका लागि चुनाव प्रचार मैले गर्नैपर्ने भन्ने कर्तव्य बोध भयो । तर चुनाव प्रचार प्रसार एक्लैले हुँदैनथ्यो । त्यसैले एकदिन लुकामारी खेल्न जम्मा भएका सबै साथीहरुलाई जम्मा गरेर मैले आफ्नो योजना सुनाएँ । राजाका पराक्रमका कथा सुनाएर जम्मा भएका सबैलाई राजालाई भोट हाल्न राजी गराएँ र आफ्ना आमाबुवालाई पनि फकाउनु भन्ने आदेश दिएँ ।
अर्को दिन स्कुलको बिहानी प्रार्थनाको लाइनमा उभिएर रुद्रघण्टी च्यातिने गरी ‘श्रीमान गम्भिर नेपाली ….’ गाउँदै गर्दा पछाडिबाट बिमलले कोट्याउँदै भन्यो, “ ओइ ! भोट हाल्न त अठार बर्ष पुग्न पर्छ रे अनि मेरा बाले गिलासमै भोट हाल्ने रे ।”
म निराश हुँदै आफ्ना प्रार्थना गर्न जोडिएका हातका औँला गनेँ । भोट हाल्न लायक हुन अझै एघार बर्ष बाँकी रहेछ । त्यस दिन साँझ अगेनाको छेउमा बसेर दुध तताउँदै गरेका मेरा बालाई मैले मलिन स्वरमा फेरि एक पटक अनुरोध गरेँ, “ बा ! हजुरले जसरी भए नि राजा भोट हाल्नु है ।” मेरा रसाएका आँखा र मलिन अनुहार देखेर बाले फिस्स हाँस्दै सहमति जनाउनु भयो ।
दसैं तिहार जसरी आएको चुनाव पनि एकदिनमै सकियो । चुनावको केही दिनपछि सडकमा घडा राखेर, स्वागतम् लेखेर, केरा र बाँसका गेट बनाएर गाउँलाई सिँगारियो ।
“आज बा चुनाब जितेको मान्छेलाई लिन जानू भा छ”, राजेशले फुर्ती लगाउँदै भन्यो । राजा गाउँ आउँदैछन भन्ने थाहा पाउँदा मेरा खुट्टाले भुइँ छाडे ।
“सँगै आउने हो ?”
“अँ ! एउटै गाडीमा ”
“सँगै एउटै सिटमा बसेर ?”
उसले हो भन्ने इशारामा टाउको हल्लायो र मलाई पहिलो पल्ट उ ठुलो मान्छेको छोरो हो भन्ने कुराको जानकारीले उप्रति ईर्ष्या जाग्यो । मेरा बा पनि लिन गएको भए बाको नजिक जाने बहानाले राजालाई त छुन पाउँथे । मलाई थकथकी लाग्यो ।
करिब एक घण्टाको कुराईपछि गाडीका लावालस्कर आए । अघिसम्मका मधुरा नाराहरु बुलन्द भए । मानिसहरु गाडीका अगाडि झुम्मिए । अघिसम्म मान्छेका कालासेता गाला राता अबिरले छोपिए । राजालाई हेर्न म भीड छिचोल्दै अघि बढेँ । अलि पर कुर्सीमा अबिरले अनुहार नचिनिने अनुहार देखेँ । त्यो रातो आकृतिको चित्रमा जस्तो काला जुँगा थिएनन् न त उसको शिरमा ढाका टोपी नै थियो । जति जति अघि बढ्यो मलाई त्यो आकृति राजाजस्तो लाग्न छाड्यो ।
“राजा यिनै हुन् ?”, आफ्नो धैर्यताको बाँधलाई भत्काएर मैले छिमेकी दाइलाई प्रश्न गरेँ ।
“अँह होइनन्”, दाइले लगाई राखेको नारा रोकेर मेरो जवाफ फर्काए । मेरो मनमा चिसो पस्यो ।
“यो को हो त ?”, मैले अब आदर गरिराख्न पर्ने आवश्यक ठानिंन ।
“खुमबहादुर खड्का !”
मेरा ओठमुख सुके । चक्कर आउला जस्तो भयो । त्यो रक्ताम्मे आकृतिसँग घोर घृणा जागेर आयो । म हतार हतारमा भीड छिचोलेर बाहिर निस्किएँ । “खुमबहादुर दाइ हाई हाई, पर्सेलाई बाई बाई”, भन्दै लगाइएको नाराको अर्थ बुझेपछि मेरा लागि त्यो फगत ध्वनि प्रदुषण भन्दा बढी केही भएन । त्यो राजाको हारमा रमाउने देशद्रोहीहरुले लगाएको नारा थियो । ‘सायद यी नै माओवादी हुनुपर्छ’ मेरो मनले अड्कल काट्यो ।
बाको अगाडि पुग्नासाथ मेरा आँखाबाट बर्बरी आँशु बगे । मेरा थरथरी काँपेका ओठबाट एउटा कारुणिक आवाज निस्कियो,“ बा ! राजाले त चुनाव हारे !”
बालबालिकालाई विद्यालय पठाए हाम्रो दायित्व पुरा भएको सम्झने हामी मध्यम वर्गीय नेपालीको लागि लकडाउनको समयमा
मनोविज्ञानका प्राध्यापक डेबोरा साउथ रिचार्डसनले गरेको एक अनुसन्धानले मानिसको यस्तो किसिमको व्यवहारको वैज्ञानिक कारण बाहिर
विश्वमा अहिले सबैभन्दा बढी संक्रमण अमेरिकामा देखिएको छ ।
उनको जिन्दगीलाई स्वयम् उनका बुवाले नै कुनैबेला ‘एक ठुलो असफलता’को उपमा दिएका थिए ।